Wal’aansa fayyaaf abdii ta’e ‘Opian tech’ – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Wal’aansa fayyaaf abdii ta’e ‘Opian tech’
Akka dargagoo Zalaalam jedhutti yoo xiqqaate iddoowwan sababa rakkoowwan daandiitiin tajaajila fayyaa argachuuf rakkatan yeroodhaan qaqqabuuf haala kan mijeessu, pirintariin siim kaardii fudhatu qophaa’eera.
Dargaggoon Zalaalam Gizaachaw hundeessaa fi hoogganaa dhaabbata teeknooloojii wal’aansa fayyaa Opian Tech jedhamuuti. Kan hundaa’e bara 2014 dhaabbanni kun ammaa hojjettoota 21 qaba, kanneen keessaa baayyinaan 8 dubartoota.
Mulatni dhaabbata kanaas bakka buufanni fayyaa dhaqabu hin dandeenyeetti tajaajila fayyaa teknooloojiin mijeeffame kennuudha. Teeknooloojii meedikaal Laabraatoorii irratti fuulleffachuun kan milkaa’e dargaggo Zalaalam, erga eebbifamees dhaabbilee fayyaa keessatti ogeessa laabraatoorii ta’uun hojetaa tureera.
Magaalaa Finfiinnee fi magaalattiin alattis wayita laabraatoorii keessa hojjechaa turetti daataa xiinxaluu, teeknooloojii qo’achuu fi mosaajiiwwan xiinxaluurratti cichee hojjechaa ture. Zalaalam barnoota fayyaa baraterratti dabalataan barnoota kompiyuutaraa barachuun akkaataa tajaajila fayyaa teeknooloojiin dhiyeessuun danda’amurratti xiyyeeffacha tureera, kanarraa ka’ee teeknooloojii Opian jedhamu hundeesse saaqeera.
Opian Tech maali laata?
Bu’aan teeknooloojiin kun meeshaalee, humna namaa fi bajata giddu-gala fayyaa tokkoof barbaachisu xiinxaluun bakka hanqina qabu dursee adda baasee kan beeksisudha.
Mosaajiin (software) Opian Tech, teeknooloojii (Articial Intelligence) amata sadiif, giddu-galli fayyaa tokko tajaajila kennuu danda’uu fi baay’ina namoota itti tajaajilamanii dursee raaguu danda’u of keessaa qaba. Odeeffannoo kanaanis qaamni giddu-gala fayyaa sana hoogganu watoota isa barbaachisan akka dhiyeessuuf gargaara jedha dargago Zalaalam. Meeshaalee teeknoolooji, qoricha, akkasumas bittaa meeshaalee fayyaan walqabatee wantoota karooraaf bu’uura ta’an kan mijeessuudha.’
Dawaan harka namaan bitamu kan barbaachisuu ol ta’ee wayita yeroon irra darbee gatamutu jira. Yookiin ammoo hamma barbaachisuu gadi bitameetu hanqinni qorichaa yeroo baayyee mudata. Opian teek kana nii fura jedhame yaadama.
Furmaata hedduu ni fida jedhame yaadamus rakkooleen akka intarneetii fi ibsaa hojiisaa gufachiisaa jiraachuu hima Zalaalam.
Opian Tech rakkoowwan mosaajii (software) fi hardware buufataalee tajaajila fayyaa keessatti wayita mudatan sirreessuuf dandeettii akka qabus hima dargagoo Zalaalam. Dargagoo Zalaalam akka jedhutti Opian Teek Itoophiyaarra darbe biyyoota biroo 23 keessatti, jaarmiyaa (USAID) waliin ta’uun babal’isuun danda’ameera.
Haaluma walfakkaatuun rakkooleen tajaajila fayyaa Afriikaa suduudaan teeknooloojii akkanaa fayyadamuun ni furama abadii jedhu qaba dargaggo Zalaalam.